The Most Saffarada Tareen dalkinii Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > The Most Saffarada Tareen dalkinii Europe
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Noorway, Tareenka Safarka Skotland, safarka Europe
Qaadashada tareenka waa mid ka mid ah hababka ugu fiican in ay la kulmaan gobolada ugu muuqaal dabiici Yurub. buuraha cajiib raaxaysta, harooyinka, Wabiyaal Bbc iyo guulahaas cajiib ah injineernimada - Kuwani waa The Inta badan Saffarada Tareen muuqaal dabiici ah in Europe.
West Highland Line Saffarada Tareen muuqaal dabiici ah, Scotland
All saarnaa ah Hogwarts Express! Inta safarka 264km waa on track hal siinaya bidhaamaysa ah moors cajiib ah, lochs, qaar ka mid ah saldhigyada ugu fog ee Britain iyo - ku daray dumisaan ah sixir Harry Potter - Viaduct Glenfinnan loo isticmaalo by Hogwarts Express.
Route: Paris si ay u Fiican
tuulooyinka qorista dhoobo-leben-roofed, canab ah nidaamsan, iyo biyo buluug qurux badan!
Liiska The Most Saffarada Tareen muuqaal dabiici ah in Europe ma noqon doono dhamaystiran oo aan Koonfur-of-France. Waa caan quruxdiisa, waayo,, sidaas darteed waa yaab ma laha waxa naga dhigteen liiska. Laga bilaabo Paris, aad tahay ee gabbaldayaha iyo beeraha lavender of Provence laba saacadood oo kaliya ka dib. Hubso in aad ku xirato dhar aad, 'Keeni Riviera Faransiis ah ma aha wax aad rabto in aad u gudbin ilaa Summer.
Valley Rhine Saffarada Tareen muuqaal dabiici ah, Germany
Raac gooladaha of Rhine River sida ka dhigaysa waddadiisa Koblenz inay Mainz. Waa kaliya kortaan iyo konton daqiiqo, laakiin waddada, aad arki doonaa Daar wayn iyo beero canab ah ku dhagno dalcadaha webiga ee. Waxaa runtii u eg wax ka mid ah ekayd a!
Berlin si Tareenadu Koblenz
Frankfurt inay Tareenadu Koblenz
Vienna si ay Tareenadu Koblenz
Stuttgart in Tareenadu Koblenz
quraac in Munich iyo casho in Venice
3 dalalka, 3 x fikradaha. U bood on tareen laga Munich si Venice iyo hesho cabsiisay 3 dalalka qiimaheedu views cajiib ah. line Tani waxay waddaa iyada oo qaar ka mid ah buuraha ugu quruxda badan, webiyaasha, iyo tuulooyinka Alpine ee Austria, Germany, iyo Italy. 3-in1 ah The Inta badan Saffarada Tareen muuqaal dabiici ah in Europe.
Munich in ay Tareenadu Venice
Haddii aad raadineyso weeyna wax ka ma aha sida dadku iyo in ka badan oo dhinaca duurjoogta ah, ka dibna safar this waxa loogu talagalay adiga. Laga bilaabo heerka badda, haybad ah fjordland si deg deg ah ay wadada u wejigooda gabiga uga yaacday ilaa iyo seeraha xaqse. U hubso in aad ku xirato kabaha socodka, maxaa yeelay, tareenka istaago at dhowr caga wadooyinka hortayada.
Our ugu danbeysay ee this post of Saffarada Tareen muuqaal dabiici ah in Europe waa, Hoydo express sitoos ah!
St. Moritz in Zermatt. 8 saacadood Naciimo saafi muuqaal dabiici ah. Waxa aan loo yaqaan sitoos Express waayo, waxba. Safraan muuqaalka ah si xurmada reer Yurub in tareenka (ay la socdaan Bernina) waa UNESCO World Heritage Site; waxaa sidoo kale guriga u madax ah Webiyada xoog badan Rhone iyo Rhine.
Geneva in Tareenadu Zermatt
Bern si Tareenadu Zermatt
Luzern in Tareenadu Zermatt
Haddaba sidaas daraaddeed in aad samaysay reading, aad diyaar u tahay inay safaro adiga kuu gaar ah muuqaal dabiici ah tareenka ee Yurub waa, at Save A Tareen waxaan leenahay ugu fiican tikidhada safarka tareenka, at heerka ugu jaban, iyo fursado badan lacagta.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fscenic-train-trips-europe%2F%0A%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Muuqaal dabiici ah #View #Europe longtrainjourneys tareen safarka
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe